I-China China Imikhiqizo Ephansi Yezintengo I-Factory Factory I-Polyester Pillow Abakhiqizi-Rayson
Lo mkhiqizo yi-hypoallergenic. Izindwangu zalo azivumeli umswakama okuyi-ecosystem ephelele yamagciwane kanye namagciwane azozalela ukwakha.
1. Uma umatilasi wakho kufanele agcine ekugcineni?
2.Yini izindlela zokukhokha owamukelayo?
3. Ngingathola amasampula athile?
Ngemuva kokuqinisekisa ukunikezwa kwethu futhi usithumele izindleko zesampula, umcamelo we-polyester, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ izinsuku ezingama-20. Ungacela inkampani e-Express ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS iqoqe inombolo ye-akhawunti, singathumela isampula kuwe nge-akhawunti yakho.
Ama-1.Customers afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha Noma inkampani yethu, vele usithinte.
2.Silandela ngokuqinile izinqubo zokulawula ezisezingeni eliphakeme ukuqinisekisa imikhiqizo yethu ihlangane noma idlule okulindelwe kwamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa zamakhasimende emhlabeni wonke.
I-3.Since isungulwe, iRayson ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule eyakho r&D Isikhungo Somklamo Womkhiqizo kanye Nentuthuko Yomkhiqizo.
4.Sithembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakalayo. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge-yethu, usishayele ngqo.
I-Rayson Global Co, Ltd iyinhlangano ehlanganyelwe yeSin-US, esungulwe eShishan Town, indawo ephezulu yezobuchwepheshe, futhi izwakala eduze kwamabhizinisi adumile anjengeVolkswagen, Honda kanye neChimei Incolux.Imboni Cishe imizuzu engama-40 ngemoto isuka eGuangzhou Baiyun International Airport neCanton Fair Exhibition Hall. Ihhovisi lethu leNhloko "Jingxin" laqala ukwenza ucingo lwentwasahlobo ukuze umatilasi ukukhiqizwa ngaphakathi ngo-1989, kuze kube manje, iRaySon ayigcini nje ngefektri yomatilasi (60,000pcs / ngenyanga) kanye ne-PP nokwelukiwe (1800tons / ngenyanga) abakhiqizi eChina nabasebenzi abangaphezu kuka-700. Bangaphezu kuka-90% wemikhiqizo yethu bathunyelwa eYurophu, umcamelo we-polyester, eMelika, e-Australia kanye nezinye izingxenye zomhlaba. Sinikeza izingxenye zomatilasi eSerta, olwandle, i-khumbusi, i-burseland kanye nezinye izinhlobo zomatilasi ezidumile zomatilasi. URaysonON angakhiqiza umatilasi wasePocket Spring, umatilasi weBonnell Spring, umatilasi wasentwasahlobo oqhubekayo, inkumbulo umatilasi, umatilasi wefuma, umatilasi we-latex njll.